Cilmi-Baadhis Iftiiminaysa Waxtarka Caafimaad Ee Cabista Shaahu Leedahay. | Hawraar
Cilmi-Baadhis Iftiiminaysa Waxtarka Caafimaad Ee Cabista Shaahu Leedahay.
Cilmibaadhis lagu sameeyay shaaha ayaa natiijadii ka soo baxday la sheegay in haddii qofku uu dhawr koob oo shaah uu cabo maalintii uu ka ilaaliyo qaadista cudur.
Aqoonyahanada baaris cilmiyeedka sameeyey oo ka tirsan jaamacadaha Havard iyo Brigham iyo Isbitaalka haweenka ee Boston ayaa sheegaysa in coffee cabistu aanay saamayn la mid ah lahayn.
Culimada sayniska waxay ogaadeen in walax amino acid ah oo loo yaqaan L-thaniin oo shaaha ku jirtaa ay xoojiso awooda ay unugyada jirka ee loo yaqaan T cells kula dagaalamaan jeermiga, unugyadaas waa kuwa safka hore ee difaaca jirku isaga celliyo weerarada bacteria iyo viruska.